Amazon inogona kuvhura inoyerera mumhanzi sevhisi nezviziviso svondo rinouya | Ndinobva mac
Mumakore achangopfuura, nekuda kwenzvimbo dzakasiyana dzemimhanzi, piracy yakadzikiswa zvakanyanya, kunyange hazvo mareti anoremekedzwa nemakambani ekure asingadi ivo, asi zvicharamba zvirinani pane kusatambira kana euro imwe chete. Spotify yaive imwe yemakambani ekutanga kubheja pane ino sevhisi.
Parizvino, huwandu hwemasevhisi ekushambadzira masevhisi akasiyana kwazvo uye angangoita ese makuru, kunze kweMicrosoft, ane yavo. Nekudaro, iyo yega yemahara, kunyangwe iine kushambadza, inopihwa naSpotify. Asi maererano nerunyerekupe rwakasiyana, hazvigone kuve izvo chete, kubvira Amazon inogona kujoina pati svondo rinouya.
Sekureva kwevanhu vakasiyana-siyana vasingazivikanwe vakataura nechinyorwa cheBillboard, ichi chiitiko chitsva chemimhanzi chichatangwa zviri pamutemo svondo rinouya. Parizvino, Amazon inotipa Amazon Music Unlimited, yako mimhanzi yekushambadzira sevhisi nemutengo mumwe chete seApple Music kana Spotify uye Prime Music, yemahara sevhisi yemimhanzi yeVashandisi veVakuru vane mamirioni maviri enziyo anowanikwa kwavari pasina kushambadzira.
Amazon haina kumbobvira yazivisa zviri pamutemo huwandu hwevanyori kune yayo yekushambadzira mimhanzi sevhisi, asi zvinofungidzirwa izvo yakapera gore rapfuura nevanyori vangangosvika mamirioni makumi maviri. Apple Music, yechikamu chayo, parizvino ine vanyoreri mamirioni makumi maviri nemasere muUnited States moga, uye vanokwana makumi mashanu emamiriyoni pasi rese. Nhamba dzekupedzisira kubva kuSpotify dzinotiratidza mashandisiro anoita kambani 28 mamirioni vanobhadharisa uye vanopfuura mamirioni zana vashandisi vebasa nezviziviso.
Amazon inoda kutora mukana weichi chitsva sevhisi, iyo ichave iripo paAmazon Echo, kuitira kuti vashandisi vachiri kuishandisa, Tarisa uone zvakanakira zvarinopa uye pakupedzisira chinja kune yakabhadharwa sevhisi. Parizvino, isu tichafanirwa kumirira kusvika svondo rinouya kuti tione kana aya makuhwa ari echokwadi uye isu tichiona mukwikwidzi mutsva mumhanzi wekutenderera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Amazon inogona kuburitsa inozivisa mimhanzi sevhisi nezviziviso svondo rinouya
Kwete Prime Music ndiyo sevhisi yevashandisi veAmazon Prime. Iyi sevhisi ine mamirioni maviri nziyo asi haitiratidze chero rudzi rwechiitiko.
Mitikiti yevadzidzi veWWDC yegore rino yatogovaniswa
Angela Ahrendts haasisiri chikamu chevashandi veApple